एमालेमा अझै कुरा किन मिलेन ? | Himal Times
Home Flash News एमालेमा अझै कुरा किन मिलेन ?
काठमाण्डौँ । एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अध्यक्ष केपी ओलीलाई विश्वास गर्न नसक्दा विवाद समाधानले गति लिन सकेको छैन। दई दिनयता विवाद समाधानका दिशातर्फ बढेको भन्दै एमाले नेताहरू उत्साहित देखिए पनि प्रगति हुन नसक्दा बिहीबार बस्ने भनेको कार्यदलको बैठक बस्न सकेन।
बैठकस्थलबाट बाहिरिने क्रममा नेपाल पक्षका नेता भुसालले १० दिनअघि तय गरेका अजेन्डामै विवाद अड्किएको बताए। यसले विवाद मिल्ने दिशातर्फ भनी मंगलबार र बुधबार गरिएको दाबीको समेत खण्डन गरेको छ। नेता नेपालले सम्मानजनक सहकार्य र सहमति खोजिरहेका छन्। उनले निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा आफ्नो पनि हस्ताक्षर चल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सो विषयमा ओलीले सहमति जनाउन सकेका छैनन्।
‘कार्यदलमा छलफल नै नभएको विषयमा दुवै नेता कुरा उठाउँछन् र दुवै मिल्नेभन्दा पनि विवाद लम्ब्याउन लाग्छन्, यही कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौ’, ओली पक्षका एक नेताले भने। नागरिक दैनिकबाट ।
Previous articleकोरिया जाने श्रमिकको कोभिड बीमाका लागि आह्वान
Next articleनिर्मात्री तथा नायिका जेनी कुँवरले गरिन् देहत्याग